आज जनैपुर्णिमा एवम् रक्षा बन्धन मनाइदै – मुलधार न्युज
Home > समाचार > आज जनैपुर्णिमा एवम् रक्षा बन्धन मनाइदै
आज जनैपुर्णिमा एवम् रक्षा बन्धन मनाइदै
१० भाद्र २०७५, आईतवार ०७:३०
काठमाडौं –श्रावण शुक्ल पूर्णिमाका अवसरमा आज जनैपूर्णिमा तथा ऋषितर्पणी पर्व मनाइँदैछ । प्रत्येक वर्षको श्रावण शुक्ल पूर्णिमाका अवसरमा जनैपूर्णिमा पर्व मनाउने प्रचलन रहिआएको छ ।
यसै दिन आत्माको शुद्धीकरण र शरीरको रक्षाका लागि ब्राह्मण पुरोहितको हातबाट नाडीमा रक्षाबन्धन बाँध्ने प्रचलन रहेको छ । शास्त्रीय मान्यताअनुसार विशेषगरी ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य वर्गले वर्षदिन वेद पढ्नुपर्ने र त्यसको समाप्तिको दिनका रुपमा जनै पूर्णिमालाई लिने गरिन्छ । यस दिन स्नान गरी सप्तऋषिसहित ब्रह्मा विष्णु महेश्वरको पूजा गरी जनै मन्तरेर त्यसलाई धारण गर्ने प्रचलन छ ।
यो दिन पाटनको कुम्भेश्वर, रसुवाको गोसाइँकुण्ड, नुवाकोटको देवीघाटलगायतका धार्मिक क्षेत्रमा ठूलो मेलासमेत लाग्ने गर्दछ । तराई क्षेत्रमा दिदी बहिनीले आफ्ना दाजुभाइको नाडीमा दीर्घायु तथा सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै राखी बाँध्ने चलन रहेकामा पछिल्ला वर्षमा पहाडी क्षेत्रमा पनि राखी बाँध्न थालिएको छ । नेवार समुदाय भने यस पर्वलाई गुन्हु पुन्हीको रुपमा मनाइन्छ ।
जनैपूर्णिमाका दिन मास, भटमास, केराउ, मुग, चना, सिमी, गुराँस र बोडी गरी नौ थरिका गेडागुडी मिसाएर बनाइएको क्वाँटी खाने चलन छ । खेतीपातीका क्रमममा थकित शरीरमा शक्ति प्रदान गर्न टुसा आएको पौष्टिक तत्वयुक्त क्वाँटी खाइनुले यसलाई प्रकृतिसम्मत पर्वका रुपमा पनि लिइन्छ ।
सशस्त्र प्रहरीद्धारा एघार लाख बढीको अवैध मरिच बरामद
प्रहरीले वीरगञ्जमा गोली चलायो, पेस्तोल र गोलीसहित एक जना पक्राउ
पूर्वमन्त्री न्यौपानेसहित १४ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर
मेरो कार्यकालमा प्रहरी संगठन सर्वोत्कृष्ट हुन सफलः आइजीपी खनाल
प्रधानसेनापति थापाले किन रोजे पहिलो निरीक्षण भ्रमणकालागी धनकुटा
कहाँ बाट सुरु भयो थालीनाँच ?
नागढुङ्गाबाट लागूऔषधसहित एक पक्राउ
मिटरमा नचल्ने ट्याक्सी कास्की प्रहरी प्रमुखको टार्गेटमा, भटाभट कारबाही गरिदै !
काठमाडौँको मुलपानीमा जुवा खालमा प्रहरीको छापा, झ्यालबाट भाग्दा दुर्इ जनाको मृत्यु
सेनाद्धारा पर्साका नागरिकसँग सम्वाद